Fanatanjahan-tena amin'ny tongotra fohy - Dingana, toro-hevitra ary maro hafa | Bezzia
Fanatanjahan-tena hatramin'ny tongotra fohy
Susana godoy | 10/06/2021 14:00 | fanatanjahan-tena
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny fampihetseham-batana tsara indrindra hampihenana ny lanjan-tongotra? Androany ianao dia hamela fisalasalana satria iray amin'ireo safidy tadiavin'ny be sy ny maro. Tsy mora foana ny mampidina ilay faritra manokana amin'ny vatantsika ary noho izany antony izany dia mirona hamoy fo haingana isika.
Noho izany, tsara kokoa ny manao a fitambaran'ireo fanazaran-tena fototra, iray manokana manokana ary izany rehetra izany dia manodidina azy amin'ny sakafo mahasalama aiza no misy. Amin'izay fotoana izay ihany isika vao afaka mahatratra izay rehetra kasaintsika hatao. Mazava ho azy, tsy maintsy manam-paharetana sy fikirizana kely ianao. Manomboka miady amin'ny tanjontsika ve isika?
1 Ahoana ny fandoroana haingana ny tavy amin'ny tongotra
2 Inona no hijanonana amin'ny fihinanana amin'ny tongotra somary mahia
3 Fanatanjahan-tena hatramin'ny tongotra sy feny somary manify
3.3 Miakatra sy midina
4 Fanazaran-tena amin'ny tongotra manify ary manafoana ny cellulite
5 Fetsy sy fanazaran-tena hampihenjana ny feny
Ahoana ny fandoroana haingana ny tavy amin'ny tongotra
Na dia tadiavintsika aza izany dia efa nilaza izahay fa tsy afaka mamoy tavy foana amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana amin'ny fomba maika. Fa marina fa afaka mahita lalan-kely somary fohy kokoa isika. Ny voalohany dia ny mieritreritra sakafo mahasalama na fomba fiaina mahasalama. Tsy mila mosarena isika Tsy latsa-danja ihany koa, fa mampihena ny fihinanana kaloria fotsiny isika, misafidy legioma sy proteinina bebe kokoa, mitazona gliosida fa manala ny sakafo endasina sy ny mofomamy mandritra ny fotoana fohy.
Etsy ankilany, misy ny ampahany amin'ny fanazaran-tena izay feno sakafo. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny manomboka amin'ny fitsambikinana manao fifehezana toy ny hetsika kardia. Iza avy ireo? Mandehana mitsangatsangana amin'ny hafainganam-pandeha antonony, manaova bisikileta na mihodina ary mazava ho azy, ny fiakarana na fidinana amin'ny tohatra dia toa izany ihany koa. Izy ireo dia hetsika rehetra izay mihazakazaka ny fo saika ny minitra voalohany, izay hanome valiny tsara kokoa rehefa miresaka veloma ny tavy. Na alohan'izay, mandritra ary aorian'izay, dia tadidio ny misotro rano be na dite raokandro ary avelao ny zava-pisotro mamy. Ny dingana voalohany vitanao mba hahatratrarana ny tanjona tadiavina dia efa noraisina!
Inona no hijanonana amin'ny fihinanana amin'ny tongotra somary mahia
Fanontaniana tena miverimberina io rehefa miresaka momba ny fihenan'ny lanja amin'ny tongotra na amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. SAINGY ny marina dia tokony hihinana tokoa isika, saingy mahasalama kokoa sy maro karazana kokoa. Marina fa indray mandeha isan-kerinandro dia afaka manaram-po amin'ny tenantsika isika, fa kosa raha mitazona fomba fiaina mifototra amin'ny fihinanana sakafo mahasalama isika dia hahatratra ilay tanjona haingana noho izay andrasantsika.
Tsy maintsy manao veloma, na manao veloma ny sakafo efa masaka rehetra, endasina na ny mofomamy.
Toy izany koa, amin'ny zava-pisotro misy gazy karbonika na ranona fonosina.
Hisotro infusions na kafe bebe kokoa izahay fa misy ronono an-tsokosoko, ary koa yogourt tsy misy siramamy.
Raha ny hena dia marina fa indroa isan-kerinandro dia afaka manana izay tianao ianao. Fa ny ankamaroan'ny fotoana tokony hifantoka amin'ny hena fotsy toy ny akoho na vorontsiloza isika.
Ny trondro, ny tuna ary ny hazandranomasina sasany dia ho anisan'ny sakafonay vaovao ihany koa.
Mazava ho azy, ireo proteinina rehetra ireo dia tsy maintsy ampifangaroina amin'ny legioma. Raha ny marina dia handrakotra ny antsasaky ny takelakao ireo. Amin'ny antsasany hafa, ny ampahany iray dia ho an'ny proteinina ary ny iray kosa ho an'ny gliosida toy ny mofo varimbazaha na paty.
Ahitana voankazo mandritra ny fotoana fohy ary ho an'ny fandraisana anjara amin'ny vitamina ilainao koa.
Fanatanjahan-tena hatramin'ny tongotra sy feny somary manify
Inona no fanatanjahan-tena tsara indrindra hampihenana ny tongotrao? Fanontaniana manenjika antsika foana izy io ary ankehitriny, manana ny valiny isika. Saingy tsy iray ihany io, fa hahita maromaro isika ary tena mandaitra daholo, noho izany, hizaha toetra azy ireo amin'ny vatantsika isika.
Alohan'ny hanombohana rehefa misy Fanao fanazaran-tenaManoro hevitra hatrany ny hafanana mialoha mba hisorohana ny ratra manaraka. Raha ny voalaza, raha ny amin'ny famaliana ny fanontaniana momba ny fampihetseham-batana tsara indrindra amin'ny tongotra fohy, dia tavela miaraka amin'ny squats amin'ny toerana voalohany isika. Manana kinova maromaro izahay, misy na tsy misy lanjany, misy bar, sumo, isometrika, sns. Nefa tsy maintsy lazaina fa izy rehetra dia ho tonga lafatra kokoa hiatrehana izay mitondra antsika eto ankehitriny. Inona koa, azonao atao ny mamorona fomba mahazatra miaraka amina karazana maro hahatonga ny fampiofanana ho mahafinaritra kokoa. Aza adino ny miala sasatra mandritra ny 20 segondra eo anelanelan'ny sakana tsirairay.
Amin'ity tranga ity, ny dingan-dàlana dia hanampy antsika hampihena ny lanja fa mba hanamafisana ny tongotra manontolo koa. Ka tsy maintsy misy koa izany amin'ny fanaontsika andavanandro. Mitsangana ianao, miaraka amina fisarahana kely eo anelanelan'izy ireo ary miverina miverina amin'ny tongotrao iray, fa ny iray kosa mijanona miolakolaka. Nefa tadidio fa ny lohalika dia tsy tokony handalo ny ampahany amin'ny tongotra satria mety hanana karazana ratra isika amin'izay. Ny havokavoka dia mety miaraka amin'ny mitsambikina, amin'ny sisiny, miaraka amin'ny daka mankany aloha na amin'ny fiakarana aoriana, sns. Inona no mahatonga antsika hanana safidy indray hamorona fanazaran-tena lavorary. Azonao atao ny manambatra squat ary mivoaka avy ao, makà lavaka.
Miakatra sy midina
Dingana iray, dabilio na dingana iray no ho fototry ny fanazaran-tena toa izao. Satria mamela antsika hanohy hanome ny fihetsiky ny tongotsika koa io, izay mitaky izany. Ary koa mampiditra ny valahana, quad na zanak'omby amin'ny fanazaran-tena toa izao isika. Manomboka mijoro eo alohan'ny dianay izahay, fa raha nisafidy dabilio na vatasarihana ianao dia tsy tokony ho avo noho ny lohalika izany. Napetrakay teo amboniny ny tongotra iray, nanao dingana iray izahay ary nanery ny tenanay hiakatra amin'ilay tongotra ilany. Na inona na inona haavo voafidy, andramo hatrany ny tsy hikorontana ny vatana, fa ny hitazomana ny lamosina, hahatonga ny hery ao amin'ny tongotsika. Azonao atao ny mifandimby tongotra mba hahavita milamina kokoa.
Fanatanjahan-tena tanteraka izany, noho izany dia tsy maintsy atao amin'ny fampiofanana antsika koa izany. Azonao atao ny manomboka ny manao «squat» sy ny «squat». Avy eo, apetraho amin'ny tany ny tananao dia hatsipinao miverina ny tongotrao, miaraka amin'ny tsindry kely. Hitsangana isika avy eo ary eny hitsambikina isika, hiverina amin'ny tany indray hanomboka ny fizotrany. Raha vita amin'ny fomba mailaka dia hahazo vokatra tsara isika satria hanatsara ny fo ihany koa. Mazava ho azy fa tokony hanitsy ny hamafiny sy ny ezaka ataonao foana ianao.
Fanazaran-tena amin'ny tongotra manify ary manafoana ny cellulite
Ny olana iray hafa mampiahiahy antsika dia ny cellulite. Iray amin'ireo vato misakana izay tsy maharesy foana, noho izany dia mila manao zavatra betsaka avy amintsika isika. Ho fanampin'ireo tolo-kevitra rehetra teo aloha dia tsy maintsy ampiana nuansa sasany. Ohatra, eo amin'ny sehatry ny sakafo dia marina izany eo ihany koa ny voankazo fa amin'ity tranga ity dia hiloka bebe kokoa amin'ny frezy, watermelon na akondro isika satria manana antioxidant izy ireo ary manakana antsika tsy hitazona tsiranoka be dia be, izay iray amin'ireo fototra iangonan'ny cellulite ankahalaina.
Anisan'ireo fanazaran-tena hampihena ny tongotra sy hanafoanana ny cellulite, sisa tavela amin'ireo izay mila tanjaka kely isika. Ny tsara indrindra amin'izany dia ny filokana amin'ny tarika elastika, izay manampy hatrany amin'ny feo ny ampahany tsirairay izay mandeha. Ka eto dia tena ilaina izany. Aza adino ny havokavoka sy ny squats izay tsy afaka eo mihitsy noho io antony io. Nefa tadidio fa amin'ity tranga ity, azonao atao ihany koa ny manampy ny tenanao amin'ny lanjany, hankafizanao ny vokatra tsara kokoa. Mitovy amin'ny fiakarana sy fidinana tohatra izay ahafahanao manome lanja ny kitrokelinao koa. Izany dia hanampy amin'ny fanafoanana ny fihenan-tsasatra ary ho afaka haneho ny tongotrao amin'ny fanararaotana haingana noho izay antenainao.
Fetsy sy fanazaran-tena hampihenjana ny feny
Anisan'ireo tetika sisa horesahina, sisa tavela amin'izany isika tokony hampitombo ny fihinanana proteinina ianao. Satria ankoatry ny fahafaham-po sy manampy antsika hampitombo ny hozatra. Raha iray amin'ireo tsy mety manadino kafe ianao amin'ny maraina, dia sotroy amin'ny antonony fa aza adino izany. Ho fanampin'izay, azonao atao foana ny miaraka aminy amin'ny ronono mihintsy. Efa fantatrao fa zava-pisotro manafaingana ny metabolisma io ka ilaintsika koa amin'ny fiainantsika. Ny sira dia ahemotra amin'ny lafiny iray, araka ny efa noeritreretinao azy, ary tsara kokoa ny manampy zava-manitra toy ny tongolo lay, oregano na izay tianao indrindra. Hahazo tsiro ianao nefa tsy mitazona ranon-javatra.
Mba hampihenana ny feny dia azonao atao ny miloka amin'ny fanazaran-tena hafa toy ny ny tetezana eo an-tsoroka. Izany hoe mila miondrika eo an-damosinao ianao ary miondrika ny tongotrao ary miaina tsikelikely ary mitraka ny vatanao fa aza atao anaty sakana. Hanohana anao hatrany ny faladian'ny tongotra sy ny ampahany amin'ny soroka. Ity fampihetseham-batana ity dia afaka miovaova amin'ny fampiakarana ny sandrinao na amin'ny fametrahana ny tongotrao amin'ny tendrony. Izy io dia iray amin'ireo fihetsika izay matetika atao ao amin'ny Pilates ary ity fifehezana ity dia hanampy antsika amin'ny fihetsika sy ny fampihetseham-batana misy ny feony. hahatratra ny tanjontsika.
Ny fananganana tongotra dia iray amin'ny fototra lehibe indrindra. Mandry indray, miatrika, hanangana tongotra iray isika ary avy eo dia hampidina azy moramora isika nefa tsy hikasika ny tany rehefa hampiakarintsika ilay iray. Ankoatra ny fampiharana an'io faritra io dia hanao toy izany koa amin'ny vavony. Ka isika dia efa mamono vorona roa amin'ny vato iray! Tsikelikely ary manaraka ny toro-hevitra rehetra dia azonao antoka fa ho hitanao ny mahasamihafa azy. Lazao anay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanatanjahan-tena hatramin'ny tongotra fohy